Tsvaga mahombekombe akanaka kwazvo muHuelva | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | General, Huelva, Beaches
La Dunhu reHuelva rinotipa makiromita nemakiromita egungwa ine mahombekombe akanaka kuti unakirwe nemamiriro ekunze akanaka, sezvo iri dunhu riri kumaodzanyemba kweSpain pamuganhu nePortugal. Nhasi kutashanya ndeimwe yemabasa ayo ane mari kwazvo, nekuti iro gungwa rinozivikanwa rine hunyanzvi hwakawanda kune avo vanouya kuHuelva, saka tichaongorora ayo ari mahombekombe akanaka eHuelva.
Kune akawanda mahombekombe muHuelva saka sarudza akanyanya kunaka zvinogona kunge zvichinyengera. Chokwadi pane mazano ezvese zvido uye zvimwe zvinozivikanwa kupfuura vamwe asi isu tichaedza kupa pfungwa yemahombekombe ayo asingafanire kupotswa kana tichizotora rwendo kuburikidza neHuelva.
1 Islantilla Gungwa
3 Matalascañas Gungwa
4 El Rompido Gungwa
5 Torre del Loro Gungwa
6 Punta Umbría Gungwa
Iri gungwa rinozivikanwa kwazvo, sezvazviri iri pakati pemataundi eIsla Cristina neLepe. Yakareba kupfuura kiromita uye ine nzvimbo zhinji. Zvakajairika kuona mhuri pamhenderekedzo iyi sezvo iri imwe yeaya ane marudzi ese ebasa aripo, izvo zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kana ukaenda nevana. Asi zvakare ine nzvimbo dzakadzikama. Pamahombekombe aya zvakare pane yakanaka sango repine kana tikaneta nekushambidza kwezuva uye mimwe mirwi inogona kuve nzvimbo yakanaka yekuzorora. Mhepo painobuda, pane hombe nzvimbo yemahombekombe uko iwe kwaunogona kufamba-famba iyo inokurudzirwa zvakanyanya nekuti nenzira iyoyo tinogona kuona nzvimbo dziri padyo sePaya del Hoyo. Iyi ndeimwe yemahombekombe anozivikanwa ayo zvakare ane mureza webhuruu gore rega rega yemhando yemvura uye masevhisi.
Iyi ndiyo imwe yemabhichi ayo avanonyatso kurudzira kana iwe ukaenda kuHuelva. Iyo El Portil pamhenderekedzo yakave yakakwenenzverwa mumadhorobha kunyangwe ikozvino iri munzvimbo yekuchengetedza zvisikwa. Iri gungwa rakanaka kwazvo, rinopfuura makiromita matatu pakureba, saka hatizove nekunzwa kwekukomberedzwa nevanhu kana tikatsvaga makona akavharika enzvimbo dzemaguta. Iyo imwe yebhuruu mureza pamhenderekedzo iyo inopa dzakasiyana mhando dze masevhisi. Zvakare kubva munzvimbo ino unogona kuona iyo Flecha del Rompido.
Iri gungwa rine mukurumbira chaizvo nekuti yakareba kudarika makiromita mashanu uye inoita kuti uwane netsoka kusvika Doñana National Park, inonyanya kukosha kuchengetedza kwayo. Inopa kristaro yakajeka mvura uye masevhisi, asi zvakare iri yakazara muzhizha nekuti ndiyo imwe yeanonyanya kufarirwa uye padhuze neSeville, izvo zvinoita kuti isarambe iri sarudzo yakanakisa kana tiri kutsvaga kuvanzika. Asi zvirokwazvo igungwa rinofanirwa kushanyirwa nekuti isu tinokwanisa zvakare kuwana iyo nzvimbo yekuchengetedza. Munzvimbo ino tinokwanisa zvakare kuona Torre de la Higuera, chivakwa chezana ramakore rechi XNUMX chakakoromoka pakaitika kudengenyeka kwenyika kuLisbon. Iri zvakare igungwa iro vateveri vemitambo yemvura vakaita semhepo yekumhepo vanouya kwairi.
El Rompido Gungwa
Iyi ndeimwe yemabhichi auchazoda, ine yakanaka yayo jecha regoridhe uye iri mu Marismas del Río Piedras Natural Park. Unogona kuenda nechikepe kune mate ejecha anogona kuoneka kubva kumahombekombe, anozivikanwa seFlecha del Rompido. Iri igungwa rakadzikama zvikuru risina kana masevhisi asi kwaunogona kunakidzwa nemasikirwo zvakanyanya. Pedyo nemusha wehove weCartaya, nzvimbo inoyevedza ine dzimba chena.
Torre del Loro Gungwa
Iri gungwa nderimwe revaya isu isu inobvumidza iwe kunakirwa nenzvimbo dzisina kuwanda kwemaguta, ndega nemasikirwo. Iri gungwa rine mukana wakanaka uye kupaka, kunyangwe iwe uchifanira kufamba uchibva panzvimbo ino kuenda kugungwa, saka hazviwanzo kurudzirwa kumhuri kana vanhu vane kufamba kushoma. Iri igungwa hombe remakiromita mana neyakajairika jecha regoridhe renzvimbo yatinozowanawo nhare yekare kubva muzana ramakore regumi nematanhatu ndiyo inopa iro zita regungwa. Iyi shongwe ndeyePalos de la Frontera, Moguer, Almonte naLucena del Puerto.
Punta Umbría Gungwa
Iri richava rimwe bhishi rakabatikana munguva yezhizha sezvo iri yemahombekombe eguta iri muPunta Umbría. Iri pedyo ne Marismas de Odiel nzvimbo yakasikwa saka ine kukosha kukuru. Iri igungwa rinopa masevhisi ese uye ndosaka kazhinji riri iro rinodikanwa kune avo vanogara munzvimbo ino, zvakare kuverenga pamureza webhuruu kune zvese zvarinopa kune vashanyi. Nekudaro, kune mamwezve emahombekombe epedyo padyo seLa Canaleta. Mumahombekombe ari padyo eEnebrales iwe unogona zvakare kudzidzira nudism.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Mahombekombe akanaka eHuelva
Zvitsuwa zvakanakisa kwazvo zvePortugal
Porto nemahombekombe ayo akanaka